ऋणले कहिलै पिछा छोड्दैन् ? यी उपायबाट पाउनुहुनेछ छुटकारा – Sandesh Press
May 18, 2021 288
एजेन्सी । अधिकांश मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिने गर्दछन्। उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसके जीवनमा निकै तनाव खेप्नु पर्ने हुन्छ। ऋणको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन सक्छ। जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले
उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ।
मंगह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अष्ठम, द्वादश, षष्ठम भावमा अशुव हुने हुँदा व्यक्ति ऋणी बन्ने गर्दछ।काठमाडौँ । हिन्दू संस्कार अनुसार हरेक घरमा पुजा पाठ गरिने गरिन्छ। पुजा पाठ गर्नु परम्परागत नियम हो। शास्त्रमा पुजा पाठ गर्ने समयमा केही नियम बनाइएको छ।ती नियमको पालना गर्दा चमत्कारी फल प्राप्त हुने गर्दछ। सधै पुजा पाठ गर्ने व्यक्तिलाई पनि यस्ता नियमका बारेमा थाहा नहुन सक्छ। ती नियमको पालना नगरेकै कारण उनीहरुलाई पुजाको फल प्राप्त नभएको हुनसक्छ।
तपाई पुजा गर्ने समयमा दिप अवश्यक बाल्ने गर्नु भएको हुनसक्छ। हिन्दू संस्कार अनुसार पुजामा दिप बाल्नु अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। दिप बाल्दा घरमा नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने र सकारात्मक उर्जाले प्रवेस गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। दिप बाल्दा देवी देवता पनि प्रसन्न हुने र सबै नराम्रो शक्ति हटेर जाने विश्वास गरिदै आइएको छ।तपाई हरेक दिन घरमा पुजा गर्दा दिप त बाल्नुहुन्छ तर दिप बाल्ने तरिकाका बारेमा थाहा नहुन सक्छ। जसका कारण तपाईलाई फल प्राप्त हुनुको साटो नोक्सान मिल्ने गर्दछ। त्यसैले आज हामीले तपाईलाई दिप बाल्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
१. जब तपाई आफ्नो घरमा पुजा गर्नुहुन्छ र पुजा गर्दा घयूको दियो बाल्नुहुन्छ भने यसलाई आफ्नो बाँया हातले र यदी तपाईले तेजको दियो बाल्नुहुन्छ भने दायाँ हालते बाल्नुहोस्। दिप बाल्ने यो निकै उत्तम उपाय हो।
२. यदी तपाई दिप बाल्नुहुन्छ भने यो कुराको ध्यान राख्न चाहियो की पुजामा टुटे फुटेका दिपको प्रयोग नगर्नुहोस्। यसलाई निकै अशुभ मानिने गरिन्छ। तपाईले चुडिएको वा टुटे फुटेको दियो बाल्नुभयो भने यसको परिणाम निकै नराम्रो आउने गर्दछ।
३. जब तपाई आफ्नो घरमा दियो बाल्नु हुन्छ भने तपाईले दियोलाई जहिले पनि भगवानको प्रतिमाको अगाडि राख्नुहोस्। भूलेर पनि यता उता दिप नबाल्नुहोस्, यसलाई अशुभ मानिने गरिन्छ।
४. यदी तपाई आफ्नो घरमा पुजा गरिरहनु भएको छ भने जब सम्म पुजा सम्पन्न हुदैन् तबसम्म दियोलाई निभ्न दिनु हुँदैन्। यसलाई अशुभ मानिने गरिन्छ।
५. यदी तपाई घयूको दियो बाल्नुहुन्छ भने त्यसमा सेतो रंगको कपास प्रयोग गर्नुहोस् र तेलको दियो बाल्नुहुन्छ भने बत्तिलाई रातो बनाएर बाल्नुहोस्। यसलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ
Prevलकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारी साधनलाई धमाधम कारवाही गर्दै प्रहरी